Ego ole ka emepe emepe ma ọ bụ tolite? Ntuziaka maka osisi na-amalite ịkwụ ụgwọ.
Akwụ ụgwọ iji mepe azụmaahịa Cannabis
Kedu ihe akwụ ụgwọ iji mepe azụmahịa azụmahịa na Illinois?
ihe nkesa cannabis nke Illinois na-akwụ $ 500,000 ruo $ 1,000,000 iji mepee.
Ego ole ka ọ ga-emepe?
Imeghe a Dispensary Cannabis na Illinois ga - adị ọnụ n'ihi ụgwọ nchekwa, ihe ndị achọrọ isi obodo, ikikere, ị ga - ahụ maka ya na ụgwọ iwu, nke ha niile na - abanye n'ọrụ ụlọ ọrụ gị. Jikere ma mee nnukwu otu na atụmatụ azụmaahịa ma nweta ezigbo ndị ndụmọdụ na akụrụngwa maka ọganiihu gị. Ndị ọkachamara anyị kwurịtara kwenyere na imepe azụmahịa cannabis gị na Illinois ga-adị n'etiti $ 400,000 ruo $ 1,000,000 maka mbubata - na $ 1.5 nde ruo $ 3.0 nde maka nka na-eto, dabere na ọnọdụ & nha nha iru. Steeti ọ bụla dịtụ iche, mana ọ bụrụ na ịchọrọ imepe ebe a na-ere akwụkwọ ma ọ bụ tolite na Illinois, iwu na obere ikikere na-etinye ọnụ ahịa karịa nke West Coast.
Nke a bụ Nchịkọta dị mkpirikpi nke Ego iji mepee oghere cannabis, ma ọ bụ nka na-eto na Illinois:
Esgwọ Ngwa Iwu
Ego Copilation Ngwa
Uche Ahịa Cannabis
Akaụntụ na Ndị Ọrụ Ndị Ọrụ Ndị ọzọ
Oge ego mkpuchi
Ego oha obodo
Kapịrị ọkwa chọrọ nke ọma
Lọ ala ụlọ rụpụta ihe & ego ụlọ ọkwụ ụgwọ
Ọnụ ahịa ifuru & Ngwaahịa
Licgwọ Akwụkwọ ikike
Estụ (IRC 280E)
Professionalgwọ Ọrụ Ndị Ọrụ Na-aga n'ihu
A kọwara ihe mmeghe nke azụmahịa Mmeba Ahụ
Ibelata ikikere maka mkpokọta cannabis ma obu Uto Craft
Ndị a bụ ụzọ kwụ ọtọ n’ego gị niile - ụgwọ ị na-akwụ steeti Illinois. E nyere ha site na ukpuru ma nwee otu onu ogugu. Nwụrụ anwụ dị mfe ịgbakwunye na mmefu ego gị, mana nke ahụ bụ naanị ụkwụ nke azụmahịa azụmaahịa gị iji mepee ohere ya ma ọ bụ nka.
Maka Ndị Na-achụ Ọrịa:
$ 5,000 anaghị akwụghachi ụgwọ ngwa.
Ego ndebanye nde $ 60,000 (emere maka ịha otu ego kwa afọ abụọ.)
Maka aghụghọ na-akọ:
$ 40,000 ego ndebanye (na-aghọ mmeghari ego)
Ọnọdụ nke mkpesa Cannabis ma ọ bụ Uto
Azụ ụlọ bụ ihe niile gbasara ebe dị, yabụ ebe ị mepere okwu azụmahịa azụmahịa cannabis gị. Mgbazinye, dị ka azụmaahịa cannabis enweghị ike ịkwụnye ego maka ego ha ala na ụlọ, bụ onye isi ụgbọ ala nke nnukwu ihe mmefu ego nke azụmahịa cannabis gị.
Squarekwụ ụgwọ ụlọ ga - emetụta ụtụ isi abụọ n'okpuru IRC 280E, yana ụgwọ ụlọ gị. Ọ bụ ezie na ndị na-akọ nri agaghị enweta IRC 280E, ha kwesịrị iwu ụlọ n'ime ụlọ maka sistemụ loop mechiri emechi ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịnọgide na-enwe ngwaahịa kachasị mma.
Needkwesiri ịhazi ego maka ma chekwaa azụmaahịa azụmahịa gị nke ọma, site na enyemaka nke ndị na-ese ihe na ndị na-ahụ maka nkà, iji chọpụta ọ bụghị naanị mbido gị, kamakwa ọnụego ọrụ gị kwa ụbọchị.
Ego ole ga-emepe emepe
Na-atụ anya ka ego adịmaahịa na mgbazinye ahịa na nsogbu nwere ike ịdị na ya. Ọ dabara nke ọma, ndị na-eke akwụkwọ na Illinois nwere ọnwa isii site na nturu ugo nke ikike iji ọnọdụ ha nyere steeti ahụ wee nye steeti ha.
Ọzọkwa, ekwesịrị ịgagharị ma kwuo maka nsogbu gbasara ezigbo ụlọ gị na ngwa gị maka na nchekwa bụ nnukwu ihe n'okpuru akara ya. Otu a ka njiri wuo ya na njiri mara nchebe achọrọ ka ejiri ya tinye n'ọrụ azụmahịa gị, nke na-anaghị esi ike na mba ndị dị n'ụsọ ọdịda anyanwụ. Ngwongwo ụlọ, ihe eji eme ya na akụrụngwa (FF&E) na-akwụ ụgwọ na Illinois n'ihi oke nchekwa nke etinyere n'iwu iji gbochie ọtụtụ cannabis na usoro ọkọnọ, ma ọ bụ izu ohi nke ego nkịtị na-eji azụ ahịa cannabis.
Ilingchịkọta Ngwa maka mkpokọta Illinois ma ọ bụ Craft Craft
Ndị ndụmọdụ ga - enyere gị aka ijikọ aka gị akwụkwọ ikike cannabis, atụmatụ azụmaahịa, atụmatụ ego, atụmatụ nchekwa, atụmatụ ịha nhatanha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ngwa emejupụtara ga-adị ka amaara na narị afọ nke 20 dị ka "Akwụkwọ ndekọ." Nkebi ahịrịokwu ahụ pụtara na tojupụtara akwụkwọ site na ntanetị akara dị elu ga-adị ukwuu, ikekwe banye ọtụtụ narị peeji.
Ihe kpatara ogologo akwụkwọ ahụ metụtara na nkwa nke azụmaahịa cannabis gị na-eme na steeti Illinois (yana steeti gị ma ọ bụrụ na ị nọ ebe ọzọ) na ngwa ya. N'elu ntinye ikike ikike itolite ma obu ikesa cannabis na azumahia gi, mgbe ahu okwu na onodu niile na nkwa banyere azụmahịa cannabis ị mebere na ngwa ahụ ghọrọ ihe achọrọ maka iji azụmaahịa gị!
Ngwa gị chọrọ atumatu ọzụzụ ndị ọrụ, atụmatụ ịgbapụta ọha, atụmatụ nchekwa na usoro iwu, ọrụ ụlọ ọrụ ọfụma, inwe ya yana nkwekọrịta ego, yana usoro ndebe aha dị mkpa na usoro eji arụ ọrụ na-etolite ma ọ bụ na-ere ahịa okenye. O nweghi azụmaahịa ọzọ nwere oke nhazi nke ga-enye mmadụ ikike iji mepee ụzọ ya.
Ọ bụrụ na ịnụla onye nwe azụmaahịa ọ bụla na-eme mkpesa banyere iwu dị oke ibu, jụọ ma ha nọ na azụmaahịa cannabis.
Usoro itinye akwụkwọ ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ruru puku kwuru puku kwuru ọ ga-akọwapụta nke ọma n'okpuru. Ihe dị mkpa azụmahịa gị nwere ike ime mgbe ị na-ewere ihe ize ndụ nke itinye akwụkwọ ikike ya bụ ma ọ dịkarịa ala ịzụta ezigbo ngwa. Illinois nwere oche ole na ole mepere emepe maka ụlọ ọrụ mbụ. Eleghi anya ị ga - emegharị nke mbụ, ma ọ bụ nke abụọ, ma ọ bụ nke atọ.
Ọ bụrụ na Illinois ga - adị ka Colorado ọnụ ọgụgụ ikike maka disinenti na ọrụ ọkọlọtọ ga - adị mkpa karịa okpukpu atọ karịa nke kachasị ugbu a, nke pụtara ndị dị ka ị ga - achọ ịnọgide na-agba ọsọ na steeti iji melite ma mezie iwu maka ndị egwuregwu ọzọ. .
Onye bu onye oru gi? Dịka ị nụrụ na m na-ekwu na mbụ na Cannabis Legalization News (Wednesde @ 2 pm CST), ụlọ ọrụ cannabis bụ egwuregwu egwuregwu - enwere ọtụtụ akụkụ nke ụlọ ọrụ gị nwere ike ịgbakwunye ma ọ bụ wepụ uru na osisi. Mgbe ị na-edepụta atụmatụ azụmahịa gị, jiri echiche ndị otu a mee ihe mgbe ị na-ejikọta: ọdịbendị gị, isi iwu gị, ụtụ isi, nchekwa, yana ndị ndụmọdụ, ndị na-etinye ego na ndị ahịa gị.
Illinois na-agbakwụnye ihe mgbaze ọhụrụ na atụmatụ azụmaahịa ọdịnala ndị sitere na steeti ndị ọzọ ji eme okenye - nhatanha mmekọrịta. Can nwere ike iji ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emepe ụlọ ọrụ cannabis nye ndị kachasị emetụta nke iwu ọgwụ ọjọọ kemgbe afọ 80 gara aga. Ikekwe ụlọ ọrụ cannabis gị ga-eme atụmatụ maka itinye ndị na-achọ n ’ụlọ ọrụ oge niile 10 ka ahịa gị nwee ike iji nganga mara dị ka enyere aka mezuo ebumnuche steeti ahụ na iwu ọhụụ okenye.
N’ezie, atụmatụ azụmaahịa kwesịrị ịnwe ụzọ ọdịnala na atụmatụ mmefu, yana onye na-ahụ maka ego ma ọ bụ CPA nwere ahụmahụ azụmaahịa gara aga, yana olile anya cannabis, ahụmịhe ga-eme ka ụlọ ọrụ gị nwee ọnụ ọgụgụ a kacha atụkwasị obi. Atụmatụ azụmaahịa nke Cannabis, n'adịghị ka atụmatụ azụmaahịa-vanilla, ọ na-adịkarị mkpa idozi akụkụ nke azụmaahịa na-esite na ntinye iwu. Dịka ọmụmaatụ, ị ga-enwe ọnụ ahịa nnabata iji hụ na arụmọrụ gị na-agbaso iwu ọhụrụ na-agbanwe agbanwe na arụmọrụ ya, yana etu a ga-esi kọwaa ihe ndị sọftụwia na ihe omume mmadụ.
Ndị ọka iwu cannabis na-eche na ọ bụ ezigbo iwu nke isi mkpịsị aka lee anya ka ndị Steeti si enweta ntinye akwụkwọ maka ndị a akwụkwọ ikike cannabis ma ọ bụ nka na-eto ikikere ma gwa ha okwu nke ha ozugbo mgbe ị na-aza ihe niile achọrọ site na iji ngwa ya, yana atụmatụ zuru ezu na nkọwapụta ihe kpatara azụmaahịa gị ji bụrụ onye tozuru etozu maka ọrụ nke ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ikike ịre ahịa cannabis.
Atụmatụ nchekwa maka mkpokọ Cannabis ma ọ bụ too
Nche apụtaghị naanị ịnwe egbe dị egwu. Nche na-agwakọta teknụzụ, nhazi ya, yana imebi iwu kachasị mma iji chụpụ usoro nke ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị mma, ònye mere ya, mgbe emechara ya, na ihe mere kpọmkwem na-ejide ya na nkọwa dị elu, bipụta, ma nye ya ngwa ngwa maka iwu ndi isi mmanye.
A na-arụkwa nchekwa n’ime ụlọ gị na nhazi ya, usoro ndị ahịa na-erite, ọnụ ụzọ, igwefoto, ọkụ ọgbụgba, ihe ụlọ, na ọbụna usoro iwu na usoro ndị ọrụ. Atụmatụ atụmatụ nke ngwa gị gụrụ maka ọtụtụ isi ihe. Azụmahịa Cannabis na-efu nnukwu ego iji mepee, mana ụgwọ mbụ ya na-achịkọta atụmatụ nchekwa dị mma ka o wee kwekọọ na nnabata steeti gị na akara kachasị elu.
Ndekọ Idebe Atụmatụ iji gbochie mbufe nke ma ọ bụ ego nkịtị
Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere sọftụwrọntọ nwere ikike nke bilitere na mbụ tupu Illinois abụrụkwa ọgwụ steeti ike. Ndị a bụ azụmaahịa okpuru ala na-etolite ebe cannabis na-aghọ azụmahịa iwu kwadoro. Kedu ngwanrọ ị ga-eji soro ntinye gị na ahịa nke ngwaahịa ahụ ga-adabere na ndụmọdụ onye ị họọrọ. Dochọghị usoro sistemụ Ntanetị gị (POS) ịbụ ezigbo, nke ọma, POS.
Ọ bụrụ n’atụmatụ azụmahịa gị gụnyere mmepe nke teknụzụ ndị dị otú ahụ na atụmatụ afọ ise ya iji mepụta usoro nkwụnye ụgwọ ego ọzọ site na ire ikikere maka ihe ọ na-ewuli, ị ga-akpọm ọ gwụla ma ị na-eche ime ya na C #. Mgbe ahụ ị ga-enwe ike iwere onye ọzọ ọrụ ma ọ bụ nye ụzọ zuru oke maka ị họrọ asụsụ ahụ.
You na usoro ọzụzụ ndị ọrụ ga -ewezigharịrị omume ga - eme omume kacha mma na-enye nkwado ziri ezi nke cannabis gị. Ekwesịrị ịgbaso usoro ndị a, ma gụnye ọzụzụ na ngwanrọ ọ bụla nke ụlọ ọrụ gị kpebiri iso na-enyere aka ịchọta ngwa ahịa ya na ahịa ya. Withmara usoro gị dị mkpa iji gbochie ịgbanye cannabis n'ụdị ọkọnọ, ma ọ bụ na-aga ihe ọjọọ site na iwere ngwaahịa kwesịrị ọrịrị ngwa ngwa.
Ike ego iji chepụta, wuo ma rụọ ọrụ Cannabis Business
Ngwa ị nweta ikike gị itolite ma ọ bụ kesa cannabis gụnyere ọtụtụ atụmatụ na atụmatụ maka ụlọ ọrụ gị yana ikekwe nchịkọta ya na akara ya. Ndị na-ese ihe dị ezigbo mkpa maka onyonyo a ma lee anya ha nwere ike ibute maka ụdị mkpụrụ osisi cannabis ọhụrụ gị. Yabụ ime ka ha dozie ụlọ maka ụlọ gị, ma ọ bụ ịkwakọ ngwaahịa agaghị adị ọnụ ala. Ma ọ bụrụ na ngwa gị na-aga nke ọma, mgbe ahụ ọ ga-adị ọnụ karịa n'ihi na achọpụtara ugbu a iji wuo ma rụọ ọrụ.
Site na ma ọ bụ ịnwetaghị ego mgbazinye na enyemaka "ndị na-achọ ịha nhatara ọhaneze," ụlọ ahịa azụmahịa niile nwere ikikere igosipụta ikike ego ha nwere iji wee bie ya wee mee ka ha bụrụ eziokwu. Costgwọ ahụ ọnụahịa pụrụ iche na ahapụrụiche maka aha maka ụlọ ahịa gị, ya na ebe obibi.
Ma azụmaahịa cannabis gị dị ọnụ ahịa nke ukwuu, ma ọ bụ ego ejiri ego, ịkwesịrị igosipụta na ị nwere ego iji were chepụta na atụmatụ nke ngwa gị, gụnyere itinye ego na-akwụ ụgwọ maka arụmọrụ gị.
Akwụkwọ ntuziaka ndị ọrụ na Mmụta & Iwu Mmụta nke Illinois Cannabis chọrọ
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ewu usoro ọrụ ha na akwụkwọ ndekọ aka ka ha na-eto ka oge na-aga, mana azụmahịa cannabis ga-enwerịrịrịrị ha tupu ha emepee ụzọ ha.
Ọzụzụ nke ndị ọrụ cannabis gị bụ nzọụkwụ ọzọ na ịtọbe ụdị gị maka ahụmịhe ndị ahịa, kamakwa na-adọta na iwu nchekwa gị site na ịkụzi omume iji lelee ahụ mmadụ na omume iji cheta nkọwa ụfọdụ ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla adịghị mma.
Mmụta na ọzụzụ nke ndị ọrụ nwere ike ịkọwapụta atumatu iji belata ma mata izu ohi, ma debe ndị ọrụ na ndị ahịa ka nsogbu ghara ịdị.
N’ezie, ndị na-eme enyi kwesịrị inwe ihe ọmụma banyere ifuru ya na ihe ndị ọ na-eme, profaịlụ terpenoid, na ụdị ka ha nwee ike inye ndị ahịa ndụmọdụ banyere ụdị ahụmịhe ha chọrọ inweta site na mkpụrụ osisi cannabis.
Iwu ọzụzụ nke onye ọrụ gị nwere ike inyere gị aka mee ka ndị ahịa gị nwee ọ happyụ, ndị na-achịkwa steeti ahụ nwee obi ụtọ, yana enweghị azụmahịa gị.
Ntinye aka nke ime obodo / nha nke ndi mmadu maka ime ka ebumnuche nke Iwu Iwu Cannabis
Agbanyeghị ọtụtụ isi ihe edepụtara maka ọgbakọ maka obodo, na oge ụfọdụ isi okwu a bụ ịbụ sọsọ dị n'ụdị njikọ aka - nke pụtara na ị ka kwesịrị ịme ya. Ọ bụrụ na ị kegidere ma etinyeghị ya, mana onye ọzọ na-arịọ arịrịọ mere, chi jie!
Kedu ihe azụmaahịa cannabis na-eme iji nyeghachi? Enwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ime iji kuziere ndị mmadụ ihe, ma ọ bụ nyere ndị merụrụ ahụ nsogbu nke agha ọgwụ ahụ aka, ma ọ bụ nwanyị ọzọ, obere pere mpe, ndịagha ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ.
Nye ego iji kwado ọrụ ntinye a na mmefu ego ị na-azụmaahịa gị, ebe ọ ga - abụ ego na - aga n’ihu nke ụlọ ọrụ gị na - aga n'ihu na - eme iji mee ka obodo ọ na - enyere aka.
Akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ Cannabis gị
Ndị na-ahụ maka ebe a na-ere akwụkwọ ga-eme ka azụmahịa ha na-aga n'ihu n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ha ga-emeso ndị ọrụ, ndị ahịa, ndị na-ere ahịa, ndị na-achịkwa steeti, ndị nwere azụmahịa azụmaahịa, ikekwe ọbụna ndị na-etinye ego. Ha nọ n'ihe a na-achọ n'ihi ụkọ ụlọ ọrụ, mana ndị na-ahụ maka ndị mmadụ na-eme atụmatụ na maka oge ọrụ, ego maka ọrụ ndị ọrụ kwa afọ nwere ike iru na nari nde dollar. Ejila okwu anyị maka ya, lee ihe onyonyo si na COVA na ụgwọ.
Akwụ ụgwọ maka ndị na-ahụ maka ọkachamara Cannabis
Enwere ma mbido ma ụgwọ na-aga n'ihu. Chọrọ onye ọka iwu, onye na-ahụ maka ego, onye na-ahụ maka arụmọrụ, yana ịnwe mkpuchi gị nke ọma. Mmefu ego n’aho n’aho n’aho n’ogbe puku kwuru iri puku.
Akwụ ụgwọ iji kwalite azụmahịa Cannabis gị
Ọbụghị naanị SEO, ndị mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, imewe na YouTubes, ị nwere ike ịnwe nkwado ọgbakọ maka ọgbakọ iji zụpụta akara gị. Ihe kachasị masị anyị bụ ịkwado nzukọ ọmụmụ ụlọ mkpokọ na mmemme ọrụ na mmekorita ya na ndị otu mmanya, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na ụlọ ọrụ cannabis. Cheta chekwaa mmefu ego maka ihe ndi a na atumatu gi ma dobe onwe gi iche na mpi gi.
Nchịkọta nke Akwụ ụgwọ iji banye Market Cannabis Legal na Illinois
Yabụ ugbu a ị ghọtara ihe kpatara anyị ji sị na ọ ga-abụ na ihe dị ka $ 500,000 iji mepee ohere cannabis na Illinois. Anyị abanyeghị na ọnụahịa akụrụngwa niile nke ọrụ na-eto nke nwere ike ibuli elu n'ihi igwe na HVAC dị iche iche, yana nchekwa, ihe ndị chọrọ iwu ụlọ. Nkezi ahụ ga-abụ ihe dịka $ 2,000,000 mana ọ dabere na njirimara ndị ọkọride chọrọ inye.